SomaliTalk.com » Dastuurka cusub oo Khilaaf ka dhex dhaliyey Sheikh Shariif iyo Cumar C/rashiid
Daabaco | Print | Faafin: SomaliTalk.com: Friday, September 3, 2010 // 5 Jawaabood
Khilaaf ayaa soo kala dhexgalay Madaxweynaha DFKMG Shariif Sheekh Axmed iyo Ra’iisal Wasaaraha DFKMG Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Khilaafka ayaa ka dhashay dastuurka cusub ee qabyada ah ee dhowaan ay xukuumaddu soo bandhigtay.
Arrintaas waxaa Idaacadda Codka Maraykaanka ee VOA ay ka waraysatay Cumar C/rashiid.
Waraysigaas halkan ka dhegeyso (VOA Sept 3, 2010)
Khamiistii ayey ahayd markii 100 xildhibaan ay ka hor yimaadeen dastuurkaas ayagoo ku tilmaamay in haay’adda UNDP ay farah akal abaxdo dastuur u soo samaynta Soomaaliya. Halkan ka dhegeyso…. (mp3)
Dhawaan ayaa la soo bandhigay dastuur qabyo ah oo Jabuuti loogu soo sameeyey Soomaaliya, dastuurkaas oo hadda khilaaf ka dhex dhaliyey madaxda sare ee DFKMG. Qoraallada Dastuurka cusub ka akhri http://somalitalk.com/tag/dastuurka/
Khilaaf Xoogan oo soo kala dhexgalay xubnaha labada gole ee dowlada FKMG iyo hay’addo caalami ah iyo Guddiga Dastuurka iyo arrimaha Federaalka
Guddiga madaxa bannaan oo hawlihii ay u xilsaarnaayeen oo ay la wareegtey UNDP … Dastuur Soomaaliyeed oo ay faraha la gashay hay’ad aan Soomaali ahayn… In Qarammada Midoobay ay faduubto Dastuurka waxaa u sahlay xukuumadda…
ilaa 100 xildhibaan ayaa ka hor yimid dastuurka qabyada ah…
Xubno ka tirsan golaha Xildhibaanada Barlamanka dowlada faradalka KMG Soomaaliya oo Khamiistii shir ku yeeshay Magaalada Muqdisho ayaa baaq u jeediyey hay’adda UNDP waxayna ugu baaqeen inay faraha kala baxdo arrimaha Soomaaliya gaar ahaan Sameynta Dastuurka cusub, waxayna dhanka kale Xukuumada Cumar Cabdirashiid Cali Shar’maarke ku eedeeyay in ay gashay khiyaano qaran.
Shirkaan waxaa ka soo qeybgalay xildhibaano ka tirsan Barlamanka FKMG waxayna intooda badan kaga hadlayeen dhaliilo ay u jeedinayeen Xukuumada uu hogaamiyo Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid iyaga oo canbaareyn dusha kaga tuuray Hay’adaha Qaramada Midoobay gaar ahaan hay’adda UNDP.
Isku imaatinkaan Baarlamaanka ayaa la isku weydaarsaday figrado waxaana lagu lafagurayey dooda ka taagan dastuurka cusub dadkii ka hadlayna waxaa ka mid ahaa oo xildhibaan Cumar islow oo hadal dheer ka jeediyay xoghayaha Barlamanka Xildhibaan wuxuuna Islow ku dheeraaday eedeymo uu u jeedinayo Dastuurka wuxuuna sharci daro iyo wax aan la aqbali Karin ku tilamaay dastuurka dalka Soomaaliya ay soo daabacdo hay’adda UNDP ee maalmahaani la soo bandhigayay waxaana uu tilmaamay in uusan aheeyn mid sharci ah maadaama sida uu sheegay aan la soo marsiin Barlamanka islamarkaana ay ka warqabin gudiga Dastuurka Barlamanka Soomaaliya.
Halkan ka dhegeyso…. (mp3)
Cumar Islow ayaa sheegay in hay’ada UN-ka looga fadhiyo oo kaliya in dowlada KMG ay ka taageeraan dhinaca dhaqaalaha iyo farsamada balse aysan shaqo ku laheyn inay soo faragaliyaan Dastuurka Soomaaliya, Cumar islow ayaa ka codsaday gudiga Madaxa banaan ee qorista dastuurka inay dastuurka dib u celiyaan ilaa inta ay ka soo ansixinayaan labada gole ee dowlada .
Shirkaan baarlmaanka oo looga doodayey arimo badan ayaa waxaa isna ka hadlay gudoomiye ku xigeenka gudiga Dastuurka iyo arimaha Federaalka Xildhibaan C/qaadir Sheekh Ismaaciil waxaana uu sheegay in aysan ka warqabin gudiga Madaxa banaan ee howlan qorista dastuurka, isagoo ku eedeeyay Wasiirka Dastuurka iyo arimaha federaalka inuu hagardaameynayo dastuurka dalka Soomaaliya xukuumaduna ay ku dhaqaaqday qiyaamo qaran sida uu hadalka u dhigay.
Haweeney ka socotay Wasaarada warfaafinta ayaa gudiga qorista dasturka u soo bandhigtay qoraal lagu sheegay in uu qabyo ahaa oo ka mid ah Dastuurka dalka Soomaaliya, kuwaasi oo sheegay in markii ay qorayeen dastuurka la soo marsiiyay Barlamanka.
Horey ayey u dhacday in eedeymo ay ka soo baxaan lana canbaareeyo hay’adda UNDP tobadkii hore dabayaqadisii ayaa sidaan oo kale warsaxaafadeed looga soo horjeedo. Qoraalka looga soo horjeedo ayaa waxaa ka mid ahaa sida hoos ku qoran.
Qoraal ka soo baxay hay’adda UNDP iyo NDI oo ku socdo xafiisyada Raiisal wasaaraha xukuumada KMG somaliya & midka gudomiyaha barlamanka ,kuna tariikheysan 16 august 2010,waxaa uu ka hadlayaa jirtaanka gudiga wada jirka ah oo ka koban xubno golaha wasirada ka socdo iyo mudanayaal ka tirsan barlamanka (joint committee from TFG –TFP ) gudigaan ayaa sida qoralku sheegayo wuxuu ka shaqeynayaa arimo ku saabsan qorshe kala guur oo lagu bedelayo dowlada fadaraalka KMG somaliya dowlad kale oo KMG ah ,dastuur aan lagu ogolaan afti qaran iyo dismo gole dastuuri ah .
Gudiga ayaa sida muuqata howlgalay durba oo fadhiyo kula yeeshay magaalada Nairobi hay’addaha UNDP iyo hay’ado kale oo caalamiah intii u dhaxaysay 23-26kii August 2010.
Hadaba gudiga dastuurka iyo arimaha fadaraalka ee barlamanka waxaa uu u cadaynayaa dhamaan inta ay quseyso in haba yaraatee gidiga noocaanah aanu wax sharci ah ku dhisneyn maadaama :.
1. Aan lag ansixin golaha wasirada sida aan ognahay
2. Lama marsiin golaha barlamanka siay u ogolaadaana
3. Laguna amgacaabin waregto madaxweyne
Ma jrito meel ay axdiga qaranka iyo sharuucda kale ee dalka kaga taalo in gudiga noocaan ah uu si wada jir ah uga hawgalo isaga oo aan heysan sharciyada kor ku xusan .
Gudigaan sharci darada ah ayaa sida aan wararka ku helayno waxa daba socdo jiritaanka mid kale oo lagu sheegay (high level committee ) oo isaguna yeelan doono kulan ku saabsan arimaha aan kor ku soo sheegnay inta u dhaxayso 6-7-da bisha September 2010 ,uuna gudoomin doono raisal wasaaraha xukuumada KMG somaliya .
Gudigaan ayaan isagana wax awood sharci ah ( mandate) ka heysanin goloyaasha dowlada iyo madaxweynaha si uu u go’aamiyo qodobada ay ka hadlayaan .
Hadaba gudiga dastuurka iyo armaha fadaraalka ee barlamanka waxaa uu beesha calamka oo ay ugu horeyso qaramada midoobay ku wargalinayaa in wixii go’aamo ah ee gudigan aan wax sharciyad aheysanin ee aan kor ku soo xusnay la gaaraan aanay noqon doonin kuwa quseeyo dowlada fadaraalka KMG Somaliya iyo hay’addaheda toona .
Waxaa kale oo aan ugu baaqeynaa in la dhowro axdiga qaranka oo tilmaamaya hay’addaha dowlada ugu xilsaaran diyarinta dasturka qaranka iyo arimaha kale ee la xiriira isla markaana aan la jahwareerin shacabka soomaaliyeed masiirkiisa .
Gudgia dasturka iyo arimaha fadaraalka ee barlamanka
Joint committee of the TFP and FTG
Translational planning conference
Monday 23 august – Thursday 26 august Nairobi
Xubnaah Dawladda ee ka qayb galay shirka (List government participants)
Xubnaha Golaha Wasiirada/Members the cabinet
1. Madobe nuunow ,minister of constitution And federal affairs
2. Ali Ahmed jama jangali , minister of higher education
3. Mustaf Cali dhuxulow , minister of planning and international cooperation
4. Burci Mohasmed Hmaza , minister of Environment
5. Mahamed Cabdihayir maareeya , minister of Labor And human Resources
Xubnaha Baarlamaanka/Members of the barlamanka
1. Ali Ismail Cabdi Gir ,MP
2. Mowlid Maane Maxamuud
3. Abdikadir sheikh Miohamed Nuur ,MP
4. Mahad Cabdalle Awad ,MP
5. Axmed Cumar gagale ,MP
6. Mohamed Awale ,Special Advisor Office of the Speaker
Waa qormo DFKMG. Halkaas waxaa ku cad muranka xoogga ee soo kala dhexgalay Baarlamaanka, Xukuumadda, guddiga “madaxa bannaan” ee dastuur samaynta iyo hay’adda UNDP oo lagu tilmaamay in ay faragelin ku samaynaso arrimaha Soomaaliya.
Dastuurka Muranka Dhaliyey ka akhri HALKAN….
5 Jawaabood " Dastuurka cusub oo Khilaaf ka dhex dhaliyey Sheikh Shariif iyo Cumar C/rashiid "
Wednesday, September 8, 2010 at 1:50 am
waa nasiib daro in aan kaboodno waxyaabaha xaqiiqda ah kuna ddono dhalanteeyka waxaa is waydiiya dadkeena mawaxaay yihiin dadka ugu damiirka iyo dadnima xumada kujirto. maxaa yeley manta marxalada wadankeena kujiro waa mid ku habooneeyn in laga hadlo sidii dadka dhibaataysan wax loogu qabanlaha. balse waxaaba laga hadlayaa dastuur cusub. anyga kama sso horjeedi mana taageersani balse waxaa iswaaydiin leh yaa dastuurka uqoraaysa kuna dhaqaysaa hadiiba adan awoodin in aad shacabka somaliyeed in aad wax uqabatid. marka horee nimanyahoow doowlada sheganayo dib isueega waxa aad lacagta kucuneeysan waa dadka dhibaataysan lafahooda iyo maalkooda .
Monday, September 6, 2010 at 4:27 pm
Aniga waxaan qabaa inaan wax kasta layska mucaaradin, oo aan la deg degin. Dastuurkan doodda ka taagan waxaan oran karaa dadka diidan inay deg degsan yihiin. Sh. Shariif waxaa haboon inuusan deg degin sidii uu ugu deg degay xil ka qaadistii Sharmaarke. Dastuurkan ra’iisal wasaaruhu wuu sheegay inuu qabyo yahay, wax lagu dari karo lagana dhimi karo, taasoo ay u taallo ayuu yiri shacabka. marka walaalayaal wixii ka dhiman si wadajir ah haloo dhammeystiro ee yaan diidmada lagala horiman. Dastuurka ma ahan mid qof keliya uu diidi karo amma oggolaan karo waa wax ay u siman yihiin dhammaan shacabka Soomaaliyeed.
Sunday, September 5, 2010 at 1:25 am
Naga guddooma salaan iyo mahadnaq Somalitalk.
Iskaba daa kuwakan inay aragti dastuur isku khilaafaan ee heshiiskoodii hore ayaa xaraan ahaa. Waayo waxay qeybka ka yihiin afduubka cadawga arxanka daran ee shacabka Soomaaliyeed asiibay sida dhinacayada dhammaan dagaalamaya oo fitinka wada (ajanabi iyo muwaadhan)
Sideey ku dhici kartaa dal iyo dad dulman oo lagu silicdiloonayo in looga sii daro un ay damqashadu noqotay in maanta dastuur iyo afti dooddu noqoto ? aaway shacabka fayow ma dadka shabaab iyo dawlad goboleed ay xabashi maamusho, xukuumad ku sheeg, barlamaan ku sheeg u afduuban .miyaa dastuur, afti iyo wax la mid ah laguba shuqloomi karaa.!!!
Bisha ramadaan fadligeeda Allaah dalka iyo dadka Somaaliyeed cadawga haka dul qaado, dal nabad ah iyo dad xalaasha isku waafaqana deg deg ha naga dhigo (Allahuma aamiin)”ASCM”
Saturday, September 4, 2010 at 9:06 pm
Sida aan fahmay dasturka si sax ah laguma wado. Siday ilatahay waa in mudo dheer shacabka la siiyaa si ay u fahmaan markaasna ugu codeeyaan. Dowlada ama hadii aysan dowlada awoodin dadkii kale oo awooda waa in ay barnaamij sameeyaan oo taleefashinada Soomaaliyeed laga soo daayo oo si fiican shacabka ugu sharaxaya qodobada dastuurkaan iyo qodob walba inta uu nolosha umada Soomaaliyeed ka saamayn doono ama ka saamaeyn Kari doono.
Waxaan qabaa hadii ay daacad naga tahay in aan qalalaasadaan, burburkaan iyo baaba’aan aan rabno in aan ka baxno waa in hadaba si fiican dastuur kaan loo dajiyo loon hirgaliyo.
Dhismo qaran sharciyada lagu wada dhaqmi doono ayaa laga bilaabaa. Dastuur qarameed waa asaaskii sharciyada dalka oo dhan.
Hadii sida Dastuur kaan qabyada ah ay ku sheegeen nabad waarta in uu dhaliyo la rabo, waa aan la dadajin. Dadweynaha Soomaaliyeed waa in qodob qodob looga wada dhaadhiciyo. Markaas kadib waa in meeshii loobato la raacaa.
Ilaahow na hag oo jidka saxda ah nagu hag.
Saturday, September 4, 2010 at 1:03 am
sida aan ka fahmay waraysigiisa wasirka 1aad waxa uu aad u danaynaya in laga gudbo waqtiga kumeel gaarka ah, sida uu qabo in looga gudbi karona sida waraysigiisa iyo warqadi uu u qoray QM ku xusan waa in la ansaxyo oo lagu dhaqmo dastuurkan cusb ee welida qabyada ah.
laakiin wasiirka koowaad waxa uu ku fashilmay inuu raaco isal dastuurka cusub oo isagu qeexaya wadiiqada sharciga ah ee loomari karo ka gudbidda xiliga kumeelgaarka. tusaale ahaan wasirka koowaad waxa uu carabaabay in ansixinta dastuurka cusub ay u marayaan baarlamaanka federalka ah oo lagu kabay odayaal dhaqameedyo iyo dad kale, iyadoo qodobka 174 ee isla dastuurka lagu xusuay in uu dastuurku dhaqan gelayo ugu danbayn 90 maalmood ka dib marka loo qaa afti dadwayne.
dhaqan gelintiisa ka dib dabcan ma harin wax kumeel gaar ah waayo isaga ayey ku qorantahay meeshii loo dhaqaaqi lahaa oo dhan. waxaa ila haboon in wasiirka koowaad uu waqti iyo energyba ku bixiyo sidii ay u qabsoomi lahayd afti dadwayne ee loo qaado dastuurka marka uu qabyada ka baxo, taas oo ay u harayso sidii ay u koontaroli lahaayeen dhul ka badan kan hadda ay maamulaan. hadii aysan awoodin taas dabcan dastuur looga dhaqmo afar degmo waxa uu weligiis ahaanaayaa mid kumeel gaar ah.